30 Nivavaka momba ny ady ho an'ny famelomana ilay matanjaka | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Zava-bavaka 30 no niantefan'ny vavaky ny ady ho an'ny mararin'ny lehilahy matanjaka
Zava-bavaka 30 no niantefan'ny vavaky ny ady ho an'ny mararin'ny lehilahy matanjaka
Desambra 11, 2018
15 Ary rehefa nahazo fahefana lehibe sy fahefana izy, dia nasehony ampahibemaso izy ka nandresy azy.
Ny zaza teraka indray zanak'Andriamanitra dia lasibatry ny devoly. Dia adala raha adala ianao ny mieritreritra fa tsy mahalala anao ny zavatra tsy hainao. Ny devoly dia mangalatra mamono and to handringana ny fiainan'ny kristiana ary manao izany amin'ny azy matanjak'i. Iza no matanjaka ?. Ny lehilahy matanjaka dia mafy loha toe-tsaina misy haizina voatendry ho an'ny olona na fianakaviana manokana. Ny asan'ireto fanahy ratsy ireto dia ny mitazona ireo fianakaviana na olona ireo ho babo. Mba hahazoana antoka fa tsy mandeha an-dàlana na mandroso eo amin'ny fiainana izy ireo, saingy androany, manana vaovao tsara ho anao aho, izahay dia handray teboka vavaka miisa 30 ho an'ny mandringa ilay mahery. Eo amin'ny sehatry ny fanahy, ny fahefana lehibe kokoa dia manjaka amin'ny hery ambany rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana ambonin'ny anarana rehetra ary ny fahefana rehetra (any an-danitra, ety an-tany sy ambanin'ny tany) dia an'i Jesosy Kristy. Noho izany rehefa manao an'ity ianao Torohevitra mivavaka amin'ny ady, Hitako Andriamanitra manome tombony ilay lehilahy matanjaka amin'ny fiainanao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Manakana fanahy mahery ny olona matanjaka, mijanona amin'ny alàlan'ny fitahianao izy ireo. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fikorontanana be dia be ao amin'ny tokantrano kristianina maro. Raha ny tokony ho izy dia ny tokantrano kristiana tsirairay no manana olo-mahery satana voatendrin'ny devoly azy. Raha tsy mivavaka ianao dia tsy ho resinao velively ny lehilahy mahery amin'ny tranon-drainao. Ny fisehoan'ny mahery dia hita amin'ny endrika isan-karazany, eto ambany ny sasany amin'ireo toetran'ilay matanjaka:
Toetran'ny olona matanjaka
A) Fahantrana maharitra:
Raha ny fahantrana dia zavatra iray ao an-tsaina, fianakaviana marobe no eo ambany fitainan'ny fahantrana, nateraky ny herin'ny demonia. Betsaka ny fianakaviana mbola tsy nisy nahavita azy io hatramin'ny nanombohany, mety ho nahita fianarana izy ireo, fa ny tsirairay kosa mbola mandady vola ara-bola. Ity no asan'ny lehilahy matanjaka ao amin'io fianakaviana io, ny vavaky ny ady amin'ny fanavotana ny olona matanjaka dia hanafaka anao amin'ny fahantrana amin'ny anaran'i Jesosy.
B). Tapitra ny fanambadiana:
Betsaka ny fianakaviana izay tsy manambady ara-potoana mihitsy ireo zanaka vavy. Na tsara sy tsara fitondran-tena toy inona aza izy ireo dia tsy manambady ara-potoana mihitsy. Betsaka aza no manomboka manan-janaka ao an-tranon-drainy. Asan'ireto fanahy ratsy ireto, fa rehefa mampiditra an'io vavaka vavaka ady io ianao amin'ny fampandehanana ny lehilahy mahery dia hitako fa tapaka ny ozona ara-panambadiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tsy ny tranga momba rehetra momba momba dia ara-pitsaboana, maro amin'izy ireo no ara-panahy, maro ireo fianakaviana iharan'ny fahirano. Tsy afaka mamantatra olana amin'ny vehivavy sy ny vadiny ireo dokotera ireo, nefa mbola tsy afaka manana ny zanak'izy ireo ihany ny. Asan'ny lehilahy mahery io, ambarako fa ho afaka ianao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
D) Aretina hafahafa sy aretina.
Ny marary dia fampahorian'ny devoly, fianakaviana maro no nararin'ny aretina hafahafa, aretina izay manaratsy ny vahaolana fitsaboana. Aretina ara-panahy izany. Izy ireo dia asan'ny mahery. Saingy rehefa mampiasa an'ireto vavaka momba ny ady ity ianao hanitsiana ilay matanjaka dia hitako fa sitrana avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
E). Fahafatesana tsy maty:
Ity koa dia asan'ny lehilahy matanjaka, ary ny fahafatesana tsy an-kanavaka fa tsy sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Fianakaviana maro no iharan'ny fahoriana. Tsy misy olona mipetraka ela ao amin 'ny fianakaviana, mety ho faty antitra efapolo. Izany dia ozona avy amin'ny devoly ary ho tapaka amin'ny anaran'i Jesosy anio.
Mitohy hatrany ny lisitra, azafady, aza atao ambanin-javatra izany vavaka izany, ataovy amin'ny fonao manontolo. Miadia ny ady tsaran'ny finoana ary tohero ny lehilahy mahery ao an-tranon'ny rainao. Mandra-pialanao sandry ny devoly dia tsy hamela anao handeha mihitsy izy. Rehefa mampiditra an'ity vavaka vavaka ady ity ianao amin'ny fampandehanana ny mahery dia hitako Andriamanitra mipoitra sy manaparitaka ny fanoherana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Na iza na iza hery manohana ny ady sy mahamenatra ahy, ho menatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Avelao ny fikomiana ratsy rehetra hanohitra ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Ny fitaovam-piadiana rehetra handrava ahy, miverina amin'ny mpandefa ankehitriny !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ny andian'i satana rehetra dia manohitra ahy, torotoro, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Izay hery rehetra mandinika ny masoandro sy ny volana hiampanga ahy, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. na inona na inona amin'ny fiainako manokatra ny varavarana ho an'ny fahavalo dia narindriko io varavarana io !!! Ary aringano tanteraka izany zavatra izany, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Mandidy ny fahavaloko rehetra aho. ny hanolotra ahy ho menatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Mampisaraka ny tenako amin'ny fifanakalozana ara-panahy amin'ny maty aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Izaho dia miteny ratsy amin'ny hazo ratsy rehetra nambolena hamely ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ireo anjelin'Andriamanitra velona, ​​manavotra ny tanin'ny velona sy ny maty ary mamerina ny tso-dranoko nangalarina, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Izay zavatra tsara rehetra teo amin'ny fiainako napetraka teo ambonin'ny alitara ratsy, hesorina amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Tompo ô, hamboly ahy amin'ny fisehonao aseho lalandava, mba ho mafana be aho noho ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy
13. Aoka ny vorona rehetra manidina noho ny amiko handray ny zana-tsipìka mirehitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Ny fanahy rehetra any am-pasana voatendriko hanohitra ny fiainako, tsy ho very na maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Aoka ny fahavalon'ny ankohonana rehetra hamorona ahy ho sosotra, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ny masera rehetra amin'ny fitanjahana sy ny fahantrana, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Amin'ny anaran'i Jesosy, mandohalika avokoa ny lohalika satanika rehetra amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako.
18. Tompo ô, gaga aho amin'ny famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy
19. Izaho dia nandevina ny fisalasalana mafy rehetra ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Akomboko ny vavan'ny mahery satana rehetra mierona amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Amin'ny ran'i Jesosy Kristy no anaovako ny fitaovam-piadiana ho an'ny mahery rehetra ao an-tranon'ny Raiko amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Notapahiko ny lohan'ny lehilahy matanjaka rehetra tamin'ny sabatry ny Tompo, tamin'ny anaran'i Jesosy.
23. Izaho dia manome endrika ny olona matanjaka rehetra amin'ny alàlan'ny anaran'i Jesosy.
24. Hofoanako ny lehilahy matanjaka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ilay lehilahy mahery an'i Satana dia niditra tao amin'ny vatanao, tamin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ny fanoherana satana rehetra amin'ny fanaparitahana ahy, dia ho malemy, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Aoka ny lehilahy matanjaka rehetra amin'ny fahantrana amin'ny fototry ny fiainako ho lavo ary ho faty ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Avelao hofongorana ny famantarana rehetra mampiseho ahy amin'ny tontolo maizina, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Izaho dia nanala ny tenako ho afaka tamin'ny tanan'ny menarana sy maingoka, tamin'ny anaran'i Jesosy.
30. Aoka ny fanjakana ratsy rehetra manjaka amiko izao ho torotoro, amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra anao Papa noho ny namaliako ny vavaka nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra30 Zavatra tokony hivavaka mba hamelomana ny rehetra
Next lahatsoratraVavaky ny ady ara-panahy 50 mba hahazoana manambady
Vavaka hanoherana ny fahitana sy ny henatra ao anaty nofinofy
30 Vavaka amin'ny varavarana misokatra miaraka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly
Desambra 12, 2018
Andinin-Baiboly 10 hivavahana rehefa mila fanasitranana ianao
30 ny vavaka momba ny fanafahana sy andininy ao amin'ny Baiboly